Toniam-pampianarana - Wikipedia
Ny toniam-pampianara dia ny fahefana momba ny fitondran-tena sy ny finoana ananan' ny fitambaran' ny eveka ary indrindra ny an' ny papa, ka ampiharina amin' ny mpino katôlika. Fandikana ny teny latina hoe magister sy magisterium izany.
Izao ny voalaza ao amin' ny Katesizin' ny Fiangonana Katôlika momba ny toniam-pampianarana:
85 "Ny adidy aman’andraikitra hivaofy amin’ny tena heviny marina ny Tenin' Andriamanitra voasoratra na nampitaina am-bava, dia nankinina irery ihany amin' ny Toniam-pampianarana velon' ny Fiangonana, ka amin' ny anaran' i Jesoa-Kristy no ampiasan' ny mpitondra mahefa izany", izany hoe ireo Eveka miombona amin' ny dimbin' i Piera, Evekan' i Rôma.
86 "Saingy tsy ambony noho ny Tenin' Andriamanitra io Toniam-pampianarana io, fa manompo azy, ary tsy mampianatra afa-tsy izay nampitaina ihany, satria noho ny didin' Andriamanitra, ombàn' ny fanampian' ny Fanahy Masina, dia mihaino an' io Tenin' Andriamanitra io amim-pitiavana, mitandrina azy amim-pahamasinana, mamelabelatra azy amim-pahamarinana ny Toniam-pampianarana, ary manovo avy amin' io tahirim-pinoana tokana io izay rehetra natolotra inoana satria nambaran' Andriamanitra".
87 Ny mpino, eo am-pahatsiarovana ny tenin' i Kristy tamin' ny apôstôliny hoe: "Izay mihaino anareo, mihaino Ahy" (Lk 10,16), dia mandray amimpankatoavana ny fampianarana sy ny torolalana izay omen' ny mpitondra azy ireo amin' ny endrika samy hafa. (Katesizin' ny Fiangonana Katôlika, p.31)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toniam-pampianarana&oldid=1014539"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 11:02 ity pejy ity.